အနည်းငယ်အနုပညာရှင်တွေသညျယရှေုတူကိုဘယ်လိုစဉ်းစားပုံကို clipboard ။
"ကျွန်မရဲ့မုတ်ဆိတ်ဆွဲထုတ်သောသူတို့အားငါနှင့်ငါ့ပါးရိုက်သောသူတို့အားငါ့ကျောကိုပေး၏။ ငါအရှက်ကွဲစေနှင့်တံထွေးထွေးခြင်းမှမဟုတ်, ငါ့မျက်နှာကိုလွှဲ "- ဟေရှာယ 50: ။6။
ရုပ်ရှင်နှင့်ပုံရိပ်တွေအပေါ်ရှည်သောဆံပင်နှင့်မုတ်ဆိတ်နှင့်အတူယရှေုသညျဖျောပွထား။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျမ်းစာနဲ့တစ်ဦးမုတ်ဆိတ်ရှိကြောင်း "ငါ့မုတ်ဆိတ်ဆွဲထုတ်။ " ကမျြးစာ၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမဟုတ်ရင်ယေရှုရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကားစင်တင်တဲ့အနာဂတ္တိပါပဲ။ ဒါပေမယ့်သူကရှည်သောဆံပင်ရှိသည်မယ်လို့ယူဆခဲ့သလဲ
အခုဆိုရင်ယရှေုသညျဆံပင်အရှည်အကြောင်းကိုဘယ်နေရာမှာကျမ်းစာထဲမှာပေမယ့်ယရှေုသညျအတိုဆံပင်ရှိကြောင်းညွှန်ပြကြောင်းကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. ရှိပါတယ်။ ရှင်ပေါလုကရှည်သောဆံပင်ရှိသည်ဖို့လူတစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
သို့မဟုတ်သူသည်ရှည်သောဆံပင်ရှိပါတယ်လျှင်လူတစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းကြောင်းအလွန်သဘောသဘာဝကိုသင်လေ့လာသင်ယူကြသည်မဟုတ်လော - 1 ကော။ 11:14 ။
သို့သော်ရှည်သောဆံပင်ခဲ့မှူးဖြစ်နှင့်သောသူတို့ရှိခဲ့သည်။ မှူးဥပမာ, Simpson နှင့်ယောဟန်ဗတ္တိဇံဆရာများအတွက်, ဖြစ်ကြသည်။
"ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထိုမိန်းမသည်အားထင်ရှားနှင့်သူမ၏ရန် said:" ။ ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သငျသညျမြုံဖြစ်ကြပြီးမည်သည့်ကလေးများမွေးဖွားပေးသောမလာကြပေမယ့်သင်တစ်ဦးသား [Simpson] ပဋိသန္ဓေ ယူ. နှင့်ဆောင်ရမည်အခုတော့သေချာသင်သည်စပျစ်ရည်ကိုသို့မဟုတ်သေရည်သေရက်ကိုမသောက်ရကြဘူးလုပ် နှင့်မစင်ကြယ်သောအရာတစုံတခုကိုစားကြဘူး။ ကောင်လေးကမိဝမ်းထဲ မှစ. ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သို့လိုက်နာဇရိလူဖြစ်ရကြမည်များအတွက်ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သင်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကိုထမ်းတစ်ဦး၏သားနှင့်သူ၏ခေါင်းပေါ်၌မျှသင်တုန်းလာကြလိမ့်မည်။ သူသည်ဖိလိတ္တိလက်မှဣသရေလအမျိုး၏ကယ်ဆယ်ရေးစတင်ပါလိမ့်မယ်။ " - တရားသူကြီးမှတ်စာ 13: 3-5
သူသည် [ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံဆရာ] ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကြီးမြတ်ရလိမ့်မည်။ စပျစ်ရည်နှင့်သေရည်သေရက်ကိုသူမသောက်ရကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, အမိဝမ်းထဲကနေသူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ - လုကာ။ 1:15 ။
အပြင်ကသူ၏ရှည်လျားသောဆံပင်ကနေ Simpson လည်းခုနစျပါးကျစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Dom 16:13: သင်ငါ့ကိုလှည့် စား. ငါ့ကိုလိမ်ညာခဲ့ကြယခုအချိန်အထိ "ဒေလိလ, ရှံဆုန်အားဆို၏" ။ အခုဆိုရင်သင်မည်သို့ဖွင့်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်မှငါ့ကိုပြောပြပါ "သူကမိန်းမအား said:" ။ ကောင်းပြီ, သင်သည်သင်၏အထည်ဖို့အတိုင်နဲ့ငါ့ဦးခေါင်းခုနစ်လုံးကိုသော့ခလောက်မျိုးကိုရက်လျှင် "" ။
"အချင်းလူသား [ယရှေု] လာ. , သူစားများနှင့်အချိုရည်, သင်ပြောပါ: ကှ္ဂျကှ္ဂျ, တစ်ဦးအစားပုပ်များနှင့်ယစ်မူးသော, အခွန်နှင့်ဆိုးသောသူတို့မိတ်ဆွေတစ်ဦး!" - လုကာ 7:34
ပိုက်ကွန်အပေါ်မှာငါ့ရှာဖွေရေး၌ငါတွေ့ပြီ စာမျက်နှာ ညျယရှေုကိုယနေ့သြသဒေါက်ဂျူးယောက်ျားအဖြစ်ဖြတ်ခဲ့လို့။
"Do သင့်ရဲ့မုတ်ဆိတ်၏အနားပိတ်သင်၏ဦးခေါင်း၏နံရံဆံပင်သို့မဟုတ်ကလစ်ဖြတ်ဘူး။ " (3 MOS 19.27)
3 ကမ်ဘာဦး, ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အမိန့်တော်အတိုင်း, သူတို့ကသူ့မုတ်ဆိတ်များနှင့်ဆံပင်အဘို့ဂရုစိုက်မယ်လို့ဘယ်လိုအသိုင်းအဝုိင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းယောက်ျား။ ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်လည်းဒီနောက်တော်သို့လိုက်ယုံကြည်သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်သင်တို့ကိုငါသိပ်ဖတ်ပါထင်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမကသူကဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်ယုဒလူကဲ့သို့ထင်။ သူမပါပြူးအသွင်အပြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသူ (:7ဖိလိပ္ပိ 2) "လူသားများကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်" အဲဒီကျမ်းစာထဲမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။
... အရာ, သူသညျဘုရားသခငျ၏ပုံစံစဉ်အခါ, ဘုရားသခင်နှင့်အတူတန်းတူဖြစ်မယ့်များကိုလည်းသိမ်းယူဘဏ္ဍာကိုအဖြစ်မှတ်မပြုခဲ့ပေမယ့်မိမိကိုမိမိတက် ပေး. , တစ်ကိုယ်တော်ကျွန်၏သဏ္ဍာန်ပေါ် ယူ. , ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားမြားသညျနှငျ့တူဖြစ်လာခဲ့သည်။ - ဖိလိပ္ပိ 2: 6-7 ။
ဖျာ 26:48: အပ်နှံတော်မူသည်ကား, သူတို့ကိုဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုပေးထားခဲ့ "သူ့ကိုဆုတ်ထားတာ, သူလည်းမရှိ, ငါနမ်းသောသူမည်သည်ကား။ "
မဿဲ 17 -: "နေရောင်ကဲ့သို့သူ၏မျက်နှာကိုထွန်းလင်းနှင့်မိမိအဝတ်ကိုအလင်းကဲ့သို့အဖြူဖြစ်လာခဲ့သည်ထိုသူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ": 2
ကျမ်းစာထဲမှာတစ်နေရာတည်းကတကယ်တော့သူ့ရဲ့အရှည်သညျယရှေုကိုဖော်ပြထားတယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရှိပါသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သညျယရှေု Patmos အပေါ်တမန်တော်ယောဟန်အားထုတ်ဖော်ပြသသောအခါဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။
နှင့်သူ၏ဦးခေါင်းနှင့်ဆံပင်ဆီးနှင်းကဲ့သို့ဖြူ, သိုးမွေးကဲ့သို့ဖြူ၏, သူ၏မျက်လုံးများသည်မီးလျှံကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ - Up ကို 1:14 ။